Raadi Qorshe Caafimaad - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Qorshayaasha Medicare Advantage Plans > Raadi Qorshe Caafimaad
Raadi Qorshe Caafimaad
Qalab kaa caawiya inaad doorato qorshahaaga ugu fiican
Waxaad u baahan tahay qorshe noloshaada ku habboon. Waxaan kaa caawin doonaa inaad hesho.
Talooyin iyo qalab loogu talagalay doorashada qorshahaaga
Is waydii dhawr su'aalood, sida:
Waa maxay heerka caafimaadkayga guud?
Maxay yihiin baahiyadayda caafimaad (tusaale, qalabka gargaarka maqalka, qalliin)?
Waa maxay dawooyinka dhakhtarku qoro ee aan u baahanahay?
Intee in le'eg ayaan ku bixiyaa daryeelka caafimaadka?
Miyaan rabaa inaan la joogo adeeg -bixiyahayga ama xarunta?
Miyaan filayaa in xaalkaygu ama baahidaydu is beddeli doonto mustaqbalka dhow?
Sidee daryeel caafimaad iiga caawin karaa inaan ku noolaado noloshayda ugu fiican?
Hel qorshayaasha la heli karo
Qalabkayaga fudud wuxuu sahlayaa in la arko qorshayaasha laga heli karo degmadaada.
Dooro qorshaha ugu fiican adiga
Eeg ikhtiyaarradayada dhinac-dhinac si aad u hesho taam kuugu habboon.
Isbarbar dhig QORSHAHA 2022
Si aad u hesho muuqaalka guud ee PDF ee khidmadaha, jar -jaryada, iyo daboolista adeegyada caadiga ah, waxaad kaloo fiirin kartaa annaga Waxyaabaha ugu Muhiimsan, laga heli karo: English, Spain, Chinese, Ruush, Iyo Vietnamese.
Raadinta Tilmaamaha Faa'iidada 2021? Riix halkan.
➔ Soo dejiso Tilmaamaha Faa'iidada 2021 in: English, Spain, Chinese, Ruush, somali, Vietnamese
Isbarbar dhig QORSHAHA 2021
Ikhtiyaari: La hadal khabiir
Khubaradayada Medicare ee ruqsada haysta ayaa halkan kuu jooga - taleefan, onlayn, ama qof ahaan. Waxay ka jawaabi karaan su'aalaha, waxay ka wada hadli karaan baahiyahaaga iyo xulashooyinkaaga, iyo (markaad diyaar u tahay) waxay kaa caawinayaan is -qoritaanka.
Aynu Ku Xirno
Isku qor internetka, taleefan, ama emayl.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Sebtember 20, 2021